INSTAGRAM NA-EKPUGHE VIDIYO NA-ELELE ỌRỤ. - AKỤKỌ - 2019
Instagram agwala ọkwa mwepụta nke ọrụ vidiyo nke na-enye gị ohere ibudata ma lee ntinye vidiyo maka otu awa. Ndị ọrụ ga-enwe ike ile vidio dị otú ahụ ma na Instagram n'onwe ya nakwa na ngwa pụrụ iche - IGTV.
Dị ka Instagram CEO Kevin Sistrom si kwuo, e mepụtara ozi ọhụrụ maka iji ihe dị iche iche nke mgbasa ozi na smartphones na ọ bụ ya mere na vidiyo niile na ya ga-adabere n'eziokwu. Ndị ọrụ adịghịdị etinye oge na-achọgharị vidiyo ndị dị ụtọ, ebe ọ bụ na ndebanye aha na ihe ndị akwadoro ga-egosipụta ozugbo na ntinye ngwa ngwa ahụ. Dị ka YouTube, ọwa ndị na-ede blọgụ ga-adị na IGTV, ndị na-ede akwụkwọ nwere ike ibudata vidio ọ bụghị naanị site na ngwaọrụ mkpanaaka, kamakwa site na kọmputa.
IGTV ngwa ga-adị na gam akporo na iOS na izu na-abịanụ. Onye na-eme ihe nkiri Louis Vuitton, bụ Virgil Ablo na onye na-abụ egwú Selena Gomez ekwuolarịrị na e kere ha onwe ha na ọrụ vidiyo.